पत्रकारितासामुका प्रश्न- फिचर - कान्तिपुर समाचार
हाम्रो देशमा जागरूक पत्रकारको होइन, वरिष्ठ पत्रकारहरूको जगजगी छ । यो वरिष्ठको उपाधि बाँड्ने काम पनि सरकारले लिए अझ जाती हुने थियो ।
फाल्गुन ७, २०७४ किशोर नेपाल
काठमाडौँ — नेपाल अहिले राजनीतिक परिवर्तनको तीव्रतम गतिमा छ । सन् १९४८ देखि सुरु भएको नेपालको राजनीतिक विकासक्रम (संविधान निर्माणको प्रक्रिया) पूरा हुन पूरै सात दशक लागेको छ । सन् २०१५ मा आएर संविधान निर्माणका प्रक्रिया टुंगिए पनि समाज निर्माणको प्रक्रिया टुंगिएको छैन ।
नेपाली जनताद्वारा इच्छित र लक्षित सबै विषयमा सबै नेपालीको सहमति भए पनि र नभए पनि, यो संविधानमा नेपाली जनताको इच्छा र आकांक्षाअनुकूल आफूलाई विकासको प्रक्रियामा लैजान सकिने लचिलोपन रहेको बताएका छन् कानुनविद् र संविधानविद्हरूले । यो संविधानका केही विशिष्टताहरू छन् । ती विशिष्टता के हुन् भने, संविधान निर्माणको समयदेखि नै देशका प्रमुख राजनीतिक दलहरूले सत्ताका सन्दर्भमा खासै किचलो उठाएका छैनन्, न त दलहरूले आपसमा वैमनस्यको नै प्रदर्शन गरेका छन् । संविधान तयार भएर लागू हुन लामो समय लागे पनि नेपालका राजनीतिक दलले धैर्य गुमाएका भए केही भन्न सकिन्नथ्यो । भाग्यवश त्यो अवस्था उत्पन्न भएन ।
नेपालजस्तो यथार्थका हिसाबले प्राचीन, परम्परागत चाहनाहरूले जेलिएको र हम्मेसी नयाँ विचारलाई ग्रहण गर्न नसक्ने भनेर चिनिएको देशका लागि अहिले बनेको संविधान एकहदसम्म अनुपम छ । संविधान संघीय अवधारणामा बनेको छ, धर्मबाट निरपेक्ष रहेको छ र यसले बहुल लोकतन्त्रको पद्धतिलाई आत्मसात् गरेको छ । देशप्रति जनताको सार्वभौमिक अधिकार यसको अर्को विशेषता हो । यति हुँदाहुँदै पनि संविधान एकहदसम्म अनुपम छ । किन भनिएको हो भने, अहिले पनि संविधानले सबै जातजाति र संस्कृतिका सत्यहरूको निरूपण गर्न सकेको छैन । जे भए पनि, संविधान क्रमिक रूपमा अघि बढ्दै जाँदा यो अझै फराकिलो हुनेमा विश्वास गर्नैपर्छ । गाउँमा खनिएका वा बनाइएका बाटा–घाटाका कुरा गर्ने हो भने पनि गल्ली गल्छेंडाहरू सधै‌ एकैनासका रहँदैनन् । मानिसले सजिलोसँग हिँड्ने बाटो त जसो गरेर पनि बनाउँछ बनाउँछ । समाज साँघुरो त रहनै सक्दैन । समाजका गुणी सदस्यहरूले देखेर, सुनेर, पढेर देश र दुनियाँबारे जुन ज्ञान हासिल गरेका हुन्छन्, त्यसैलाई भन्दछन् गतिशील मानवीय निरन्तरता । आखिर, मानव सभ्यताको नियामक पनि त मानिस नै हो ।
नेपालमा परिवर्तनको घाम अघिल्लो शताब्दीमा झुल्किए पनि त्यो घामले नेपालका डाँडाकाँडा, मैदान, खोंच र कछाडहरूलाई झलमल्ल बनाउन सकेको थिएन । परिवर्तनको सात दशक बित्न लाग्दासमेत हामीले हाम्रा सामान्य अधिकारका लागि निरन्तर संघर्ष गरेका छौं । अहिलेको परिवर्तन २०४६ सालको पहिलो राष्ट्रिय जनआन्दोलन, त्यसपछि सुरु भएको सशस्त्र संघर्ष, यसैको परिप्रेक्ष्यमा राजनीतिक दलका नेताहरूले लोकतन्त्रका लागि गरेको संघर्षको परिणाम हो– माओवादी विद्रोहीसँग नेपाल सरकारको विस्तृत शान्तिसम्झौता र २०६३ को अन्तरिम संविधान । यो सानो आलेखमा पर्दाभित्रका सबै चित्र–विचित्रहरू अटाउँदैनन् । देश सानो भए पनि यसको आयाम विशाल छ । नेपालीहरू सबैतिर छपक्क हुनु नै यसको प्रमाण हो ।
लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले स्थापित गरेका मानव अधिकारहरूको प्राप्ति र पुनस्र्थापनामा नेपाली प्रेसजगत्को भूमिका व्यापक छ । वर्तमान समयमा सैद्धान्तिक अवधारणाको चर्चा त्यति गहन हँ‘दैन । विज्ञान र प्रविधिको विकासले मानिसको चिन्तन प्रक्रियामा ठूलो परिवर्तन ल्याएको छ । सिद्धान्तहरू मौन भएका छन् । यसको अर्थ संसार सिद्धान्त शून्य हिसावले चलेको छ भन्ने होइन । ज्ञान, चिन्तन र अनुशासनको निरन्तरता भएन भने संसारमा भइरहेका वैज्ञानिक उपलब्धिहरूको अर्थ रहँदैन ।
अहिले मानिस सिद्धान्त र दर्शनका पछि लागेका छैनन् । व्यावहारिक प्रयोगको हिसाबले जे सजिलो हुन्छ र जुन कुराले मानिसलाई आकर्षित गर्दछ, त्यसैलाई अपनाउने गरेका छन् नीति–निर्माताहरूले । उदारवादी अर्थतन्त्र र खुला बजारले प्रवद्र्धन गरेको उपभोक्तावादको मुख्य ध्येय यही हो । यसलाई विद्धान्हरूले पुँजीवादी अर्थव्यवस्थाको क्रियात्मक कडी मानेका छन् । पश्चिमी राष्ट्रले प्रवद्र्धन गरेको खुला बजार र त्यसले बढाउने प्रतिस्पर्धाले समाजलाई सम्पन्नतातिर डोहोर्‍याउँछ भन्ने मान्यतामा आधारित अर्थतन्त्र उत्कर्षमा रहेको छ यतिबेला । यसैलाई भनिन्छ, उपभोक्तावादी संस्कृति । एसियाका दुई ठूला देश भारत र चीन, यही सूत्र समातेर आर्थिक विकासको प्रतिस्पर्धामा लागेका छन् । निश्चय पनि, यो नीतिले आर्थिक विकासका क्षेत्रमा अभूतपूर्व सफलता हासिल गरेको छ । संसारका धेरै गरिब देशहरूको स्तरोन्नति भएको छ ।
सञ्चारमाध्यमहरूले आर्थिक विकासका बहुराष्ट्रिय उपलब्धिहरूलाई प्राथमिकताका साथ प्रस्तुत गर्ने गरेका छन् । समाजको एउटा हिस्सालाई हेर्दा लाग्छ, समाजमा सम्पन्नता बढ्दै गएको छ । अनि, आफ्नै संसारतिर फर्केर हेर्दा विपन्नताको विद्रूप तस्वीर देखिन्छ । तर, यी परिदृश्यहरू सबै रंगीन छैनन् । एकातिर, पुँजीको विस्तार हुँदै छ भने अर्कोतिर समाजमा असमानता पनि उत्तिकै बढेको छ । गरिब र धनीबीचको खाडल गहिरिँदै गएको छ । आर्थिक समृद्धिका प्रतिफलहरूको समान वितरण हुन नसक्दा सामाजिक असन्तुलन बढ्न थालेको छ । सामाजिक दायित्वबोध गर्ने लेखक र पत्रकारहरूले यो अवस्थाको आलोचनात्मक समीक्षा गर्दै आधुनिक अर्थव्यवस्थाका कमजोरीहरू औंल्याउन थालेका छन् । भारतीय लेखक तथा टिप्पणीकार पंकज मिश्र लेख्छन्– बजार अर्थतन्त्रका उपलब्धिहरूको सक्कली अनुहार स्पष्ट देखिन थालेका छन् । चीन लोकतन्त्रबाट पहिलेको भन्दा बढी टाढिन थालेको छ । रूसमा प्रयोग भइरहेको खुला बजारको पुँजीवादी अर्थतन्त्रले चोरतन्त्रलाई बढावा दिइरहेको छ । भारत, इजरायल, श्रीलंका, थाइल्यान्ड र टर्कीजस्ता देशमा पनि अनुदारवादी नेताहरू, लोकतन्त्रमाथिको बढ्दो प्रहार र दक्षिणपन्थी अतिवादले राजनीतिलाई परिभाषित गर्न थालेका छन् ।
नेपाली समाजमा पत्रकारिताको विश्वसनीयता र सम्मान दुवैको अवस्था क्षीण छ । देशमा भएका समकालीन राजनीतिक घटनाक्रम र आर्थिक विकासका विभिन्न पक्षहरूको व्याख्या र विश्लेषण गर्न आवश्यक वातावरणको अभाव छ । सञ्चारकर्मीहरूमा सञ्चार शास्त्रको निश्चित सैद्धान्तिक अवधारणाको ज्ञान हुनुपर्छ । यसका लागि सञ्चारकर्मीले प्रेसका प्रचलित सिद्धान्तबारे जानकारी राख्नुपर्छ । प्रेसले बिनादृष्टिकोण शून्यमा काम गर्न सक्दैन । तर, नेपाली प्रेसका प्रचलित सिद्धान्त के हुन् ? यसबारे कसैले पनि केही भन्न सक्ने अवस्था छैन ।
देश परिवर्तनको बाटोमा लाग्दा देशका प्रमुख अंगहरूले पछयाउनु ठूलो कुरा होइन । अहिले देशका राष्ट्रिय प्रकाशनहरूले सबै प्रदेशबाट आ–आफ्नो समाचारपत्रको प्रादेशिक संस्करण निकाल्ने निर्णय गरेर प्रकाशनको तयारीमा लागेका छन् । यो निकै राम्रो कुरा हो । यसले नेपाली प्रेसको मन्द गतिमा तीव्रता ल्याउनेछ ।
नेपालमा प्रेसको इतिहास सय वर्षभन्दा लामो छ । तर, यो सांकेतिक महत्त्वको विषय मात्र हो । सय वर्षअघि हाम्रो देशमा अखबार निस्किन्थ्यो भनेर चित्त बुझाउने वा आत्मरति गर्ने बाटो मात्रै हो त्यो । २०१७ मा राजाले प्रेस स्वतन्त्रताको हत्या गरेपछि पनि नेपाली प्रेस जीवित रह्यो । २०३६ को जनमत संग्रहपछि अहिले पर्यन्त नेपाली प्रेस एक कदम पछि हटेको छैन । तैपनि, शताब्दीयौंदेखि नेपाली प्रेसको स्वरूप र स्वभाव किन बदलिएको छैन ? किन प्रेसले बोकेका वा बोक्नुपर्ने दायित्वहरू पूरा भएका छैनन् ? किन देशका सबै भागहरूमा सञ्चारमाध्यमको स्वरूप समान हुँदैन ? किन अनुदारवादी शासन भएका देश र स्वतन्त्र देशको सञ्चारमाध्यममा यति वढी विविधता देखिन्छ ? यी केही यस्ता प्रश्न हुन्, जसको उत्तर प्रत्येक जागरुक पत्रकारसँग हुनु आवश्यक छ । तर, हाम्रो देशमा जागरुक पत्रकारको होइन, वरिष्ठ पत्रकारहरूको जगजगी छ । यो वरिष्ठको उपाधि बाँड्ने काम पनि सरकारले लिए अझ जाति हुने थियो ।
नेपाली पत्रपत्रिकाको क्षेत्रीय वा प्रादेशिक संस्करणको प्रकाशन विविधता मात्रै हो । २०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुन:स्थापना हुँदा कान्तिपुर देशका लागि अपरिहार्य बन्यो । अब प्रादेशिक प्रकाशनमा हुने प्रतिस्पर्धाले अर्को अपरिहार्यतालाई पूरा गर्नेछ । यस्तो विविधता कुनै पनि देशको वा प्रदेशको क्षमतामा निर्भर गर्ने विषय हुन् । कुनै पनि देशको व्यवसाय र अर्थतन्त्रले प्रेसको बढ्दो आवश्यकतालाई धान्न सक्छ कि सक्दैन ? कुनै पनि देशमा सञ्चारमाध्यमका लागि आवश्यक प्राविधिक आधार र स्रोत पर्याप्त छ कि छैन ? सञ्चारमाध्यमको खपत बढाउनका लागि समाज तयार छ कि छैन ? यी केही स्थुल प्रश्न हुन्, जसको सान्दर्भिकता व्यवस्थापन पक्षसँग जोडिन्छ । क्षेत्रीय प्रकाशनको तहमा यी प्रश्नहरू समान हुन्छन् ।
विश्वव्यापी रूपमा प्रेसको चरित्र एकैनासको देखिए पनि प्रेसको काम गर्ने तरिका देश र समाजअनुसारको हुन्छ । पत्रकारिताको खाता पनि सामाजिक र राजनीतिक संरचनाअनुरूप तयार भएको हुन्छ । कुनै पनि देशको सञ्चारमाध्यममा त्यो देशको समाजको तस्बिर प्रतिविम्बित भएको हुन्छ । सञ्चारमाध्यमहरूलाई बुझ्न परिवेशको ज्ञान आवश्यक हुन्छ । यस्तो परिवेशको ज्ञान हामीसँग कति छ ? हामी पत्रकारितामा लागेका मानिसको क्षमता कति छ ? कति जाँगर छ हामीमा ? कुरा यिनै हुन् । यत्ति हो कि, पत्रकारिता अविश्वासमा हराउँछ । मानिसमा विश्वास जगाएर त्यसप्रतिको निष्ठा कायम राख्न सक्नुपर्छ । त्यसो भयो भने लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बलियो हुन्छ । २००७ सालको उच्चारण मात्रैले एउटा ठूलो परिवर्तनलाई धान्ने भएको हो नेपाल । नेपालसँग जे छ, त्यो क्षमता हो । त्यो क्षमतालाई कुनै पनि हालतमा विस्थापनमा पठाउन हुँदैन ।
नेपाल र साप्ताहिकका पूर्वसम्पादक, कान्तिपुरका पूर्वसमाचार संयोजक नेपाल हाल स्वतन्त्र लेखनमा छन् ।
राजाले राज्य नै सुम्पिँदा त जिम्मा नलिएर साथीलाई अघि सार्ने बाको जीवन अपूर्ण त हुनै सक्दैन ।
माघ २७, २०७४ किशोर नेपाल
काठमाडौँ — बा अब यो घरमा हुनुहुन्न । बा बित्नुभएको पनि दुई दशक बितिसक्यो । तर, बा हिजो साँझसम्म यही चाक्सीको बोटमुनि राखिएको बेतको कुर्सीमा बसिरहनुभएको आभास हुन छाडेको छैन ।
बा त बा नै हुनुहुन्थ्यो । मनभरि रिस उठ्दा पनि मुखमा हाँसो नछुट्ने । बा आफ्नो टाउकोमा सधैं घरबुनाको गम्छा बेरेर बस्नुहुन्थ्यो । गम्छा पनि बजारिया होइन । आमाले आँखा देखुन्जेल बाका लागि आफैं बुन्ने गर्नुहुन्थ्यो घरबुनाको गम्छा । ‘काँधमा गम्छा’ बाको मौलिक पहिचान थियो । यसरी काँधमा गम्छा बाँध्ने बाका समकालीन साथीहरू, जेठाबा–कान्छाबाहरू, इष्टमित्रहरू सबै काल–कवलित भैसकेका थिए । बाको साथी अष्टमान कहिलेकाहीं आउँथ्यो । त्यत्ति हो ।
हामी परिवारका मान्छे गाउँबाट शहर गएको बेलामा पनि बा त्यसरी नै चाक्सीको बोटमुनि बसी रहनुभएको होला भन्नेजस्तो लाग्थ्यो हामीलाई । बहम त यो पक्कै थिएन । यसलाई झझल्को भनौं । बाको झझल्को । अहिले पनि बा हामीसँग यो घरमा प्रत्यक्ष हुनुहुन्न भन्ने त सोच्नै मन लाग्दैन । किन किन । हामीलाई बा कि त बगैंचामा हुनुहुन्छ होला कि बैठकमा हुनुहुन्छ होला जस्तो लागिरहन्छ । अथवा, बा घरको नयाँ लंगपट्टीको ट्वाइलेटको कमोडमा आरामसँग बसेर अखबार पढ्दै पेट खलास तुल्याउँदै हुनुहुन्छ ।
बा सधैं अखबार पढ्नु हुन्नथ्यो । कहिलेकाहीं कुनै खबर पढेर एक्लै हाँस्नुहुन्थ्यो । प्राय: उहाँलाई कब्जियतले सताएको बेला टोलका राम्ररी पढ्न जान्ने केटाहरू बाथरुम बाहिर बसेर बालाई मध्दिम स्वरमा अखबार पढेर सुनाउँथे । नबुझेको ठाउँमा बाथरुमभित्रबाट बाको आवाज आउँथ्यो, के रे ? फेरि पढ त त्यसलाई । त्यो जमाना पनि समाचार शून्य थियो । बालाई बिहानै अखबार नपढी हुँदै नहुने । छिमेकीलाई ढोकामा अखबार ठोकिएको आवाज नआएसम्म निद्रै नखुल्ने । त्यस्तै थियो । अखबार पाएपछि अरू केही चाहिँदैनथ्यो बालाई । अखबारमा लेखिएका विषयमा बाको विश्वास एकदमै धेरै भएर त्यसो भएको होइन । राज्यले अखबार मार्फत झूटा कुरा फैलाउने हुनाले उहाँ नियमित निस्किने सबै अखबार पढ्ने गर्नुहुन्थ्यो । हाँस्नका लागि पनि बालाई अरू कुनै बहाना चाहिँदैनथ्यो । अतीतका कुरा सम्झेर हाँस्नु, अतीतका घटनामा रमाउनु बाको बानी थिएन । उहाँ आजको अखबारको झूटो समाचार पढेर भोलिको साँचो समाचारको राग थाहा पाउनुहुन्थ्यो । पढ्न त साह्रै धेरै पढ्नुभएको होइन, पढेर रमाउनुहुन्थ्यो । एक पटक पढेको पुस्तकका राम्रा भागहरू कण्ठस्थ हुन्थे । अहिलेका पढन्तेहरूको त औकात नै के र ?
बालाई टोलका बचपनदेखिका आफन्तले घेरेका हुन्थे । ती आफन्तहरू तमाखुको तयारी गर्ने काममा लाग्थे । पातो सफा पार्ने, मक्कलमा आगोका फिलिंगो तयार गर्ने, चिलिममा तमाखु भर्ने, गुडगुडे हुक्काको पानी फेर्ने । तमाखु कलामा सबै एकसेएक । त्यतिबेला त्यहाँ जम्मा हुने सबैलाई सम्झना छ होला, पचहत्तरौं जन्मदिन मनाउँदासम्म बाको आँखा निकै चम्किला र निकै तिखा थिए । बा चश्मा लाउनु हुन्नथ्यो । तै पनि, अलि टाढैको रंगीन साइनबोर्ड पनि सजिलै पढ्न सक्थे बाका आँखाले । बालाई देवनागरी लिपिमा अंग्रेजी भाषाको शब्द लेखेको र अंग्रेजी लिपिमा नेपाल भाषाको शब्द लेखेको पटक्कै मन पर्दैनथ्यो । भन्नुहुन्थ्यो, ‘यो के गाईजात्रा गरेको ।’
बा कहिलेकाहीं, भनौं महिनाको एकपल्ट, एउटा रेस्टुराँमा जाने गर्नुहुन्थ्यो मम खान । रेस्टुराँवाला अष्टमानलाई पहिले नै सूचना दिनुहुन्थ्यो, ‘यो महिनाको यति गते यति साथीभाइ समेतलाई मम खुवाउने ।’अष्टमान दाइले बाको खुब इज्जत गर्दथ्यो । बाले ममको अर्डर दिएको बेलाउ ममका लागि स्पेसल किमा तयार पार्न लगाउँथ्यो । कामदारहरूको छेउमा आफैं बसेर ‘ममख्व’ सफा गर्न लगाउँथ्यो । मम अलि बढी स्वादिलो बनाउन अष्टमानदाई ममको मसलामा हरियो प्याज मिसाउन लगाउँथ्यो । ऊ कामदारहरूलाई भन्थ्यो, ‘मम भनेको यस्तो होस् कि यो ठिक्क पाकोस् पनि र मीठो पनि होस् ।’
डेजर्टका रूपमा आधा किलो शुद्ध खुवाको मम बनाउँथ्यो बाका लागि । बाको पछि लागेर आउने सबैका लागि स्पेसल मम बन्दथ्यो । बा एक दर्जन मम खाएपछि छवटा सानो योमरी साइजको मम खानुहुन्थ्यो । आधा दर्जन कार्यकर्ता साथीहरू बाका अंगरक्षकका रूपमा चनाखो भएर सँगसँगै हिँड्थे । समय अलिकति उदार देखिए पनि बा र बाका अनन्य मित्रहरू सरकारी कस्टडीमा नै थिए । पाकिस्तानका लोकप्रिय नेता जुल्फिकर अलि भुट्टोलाई प्राणदण्ड दिइसकेको थियो ।
त्यसपछि सरकारले बा र उहाँका अनन्य मित्र कहाँ जानुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ, कसकसलाई भेट्नुहुन्छ भन्ने जानकारी बटुल्न दुई जना सीआईडी उहाँहरूको पछि–पछि खटाएको थियो । बा शहर अलि बढी नै घुम्नुहुन्थ्यो । आफूसँग आएका जत्ति सबैका लागि खाजा मगाउनुहुन्थ्यो मम । सरकारको काम गर्ने गुप्तचरलाई समेत खाजा ख्वाउने भनेपछि बुझ्नुपर्छ : बाको शान नै अर्को थियो ।
एक दिन बाले मलाई अह्राउनुभयो, ‘अष्टमानलाई बोला त ।’
उसलाई बोलाएर म बाको अगाडि आइपुग्दा त अष्टमान बाको गोडाको छेउमा बसेको । म त छक्क परें । मैले मनमनै गुनें— त्यतिबेला म जस्तो लाटो मान्छे कसरी नगर सभासद भएँ हुँला ? बा भएर पो बनायो । अरूले त तारेमाम् ।
बाले अष्टमानलाई भन्नुभयो, “चालीस पचास जनालाई पुग्ने बेस खालको ‘मोमोचा’ तयार गर पर्सी शुक्रबारलाई । ठूलठूला सरकारविरोधी नेता आउँछन् । राजाको जर्नेलहरूले शान्ति सुरक्षाका नाममा पुलिस लगाउन पनि सक्छन् । आँट छ भने मात्र हुन्छ भन अष्टमान ।”
अष्टमान अलिकति रिसायो । यो मायालु रिस थियो, बालाई मायाले पखाल्ने रिस । अष्टमान सन्किएको देखेर बा मन्द हाँस्नुभयो । त्यसपछि इष्टकोटको भित्री बगलीबाट एउटा सानो बिटो नोट झिकेर अष्टमानलाई दिँदै भन्नुभयो, ‘सामानलाई चाहिएला नि ।’
अष्टमानले पैसा लिन्न भन्यो । बाले अनेकतिरबाट सम्झाउँदा पनि अष्टमान दशबाट नौ भएन । उसले बालाई खरै तालले भन्यो, ‘तपाईंको नाकमा एक थोपा फोहोर लागेछ भने त्यो फोहोर सय थोपा अत्तरले सफा गरिदिउँला ।’ उसको कुरा सुनेर बा विन्दास हुनुभयो । आज स्वस्थानी पूर्णिमाको दिन । घरमा भएका वेला बाले स्वस्थानीको व्रत सुन्न कहिल्यै छुटाउनुभएको थिएन । एक सय आठ रोटी र एक सय आठ मीठापानको आकर्षण थियो बूढोमा । रोटी त एउटै नखाने, तर मीठा पान पाँचवटा चाहिने ।
बाको आनीबानी पनि अचम्मलाग्दो थियो । बा ब्रह्ममुहूर्तमा देखिने वाग्मती छेउमा अल्झिएका छायाहरूसँग एकाकार हुन सक्ने शक्ति राख्नुहुन्थ्यो । उहाँ मौन मिर्मिरेको आनन्दमा डुब्न सक्नुहुन्थ्यो । मानिसहरूको स–सानो हूलमा पनि अलप हुन सक्नुहुन्थ्यो । कहिलेकाहीं बा मेरो बिछयौनामा पल्टिएको जस्तो लाग्थ्यो मलाई । हामी परिवारका मानिसका लागि मात्रै होइन, सबै शहरियाका लागि बा शक्तिशाली हुनुहुन्थ्यो । कीर्तिपुर, भक्तपुर, ललितपुर र कान्तिपुर । यी शहर र यिनका आसपासका किसान बस्ती र काँठमा बाले भन्यो त्यो हुन्थ्यो । यी चारै शहर र छेउछाउका गाउँमा बा चीनका माओत्सेतुंगजत्तिकै शक्तिशाली हुनुहुन्थ्यो । माओ किन शक्तिशाली थिए ? बासँग घुम्न गएको बेला मैले एक जना मेरै उमेर १७ वर्षका स्थानीय साथीलाई सोधें । उनले जवाफ दिए, ‘माओ आफ्नो बिछ्यौना कहिल्यै कसैका लागि प्रयोग गर्न दिँदैनथे । उनलाई आफ्नो बिछ्यौना छाड्नुपर्ने परिस्थितिको सामना पनि कहिल्यै गर्नुपरेको थिएन ।’
त्यतिबेलाको सन्दर्भमा बालाई नेपालको माओत्सेतुंग भने हुन्थ्यो । उहाँ माओ जत्तिकै शक्तिशाली हुनुहुन्थ्यो । किनभने उहाँले आफ्नो बिछयौना कहिल्यै, कसैका लागि छाड्नुभएन । न बाटामा भेटिएका कुनै घाइतेलाई, न प्रसूति व्यथाले छटपटिएकी नारीलाई । माओत्सेतुंग आफ्नो घर छाडेर कतै जानुपरेको अवस्थामा आफूसँगैआफ्नो खाट र बिछयौना लिएर हिँड्थे । माओको खाट र बिछयौना उठाउन पाएर गदगद भएका कार्यकर्ताहरू साह्रै चर्को आवाजमा नारा लगाउँथे– ‘माओत्सेतुंग जिन्दावाद ।’ नारा जति चर्को लाग्थ्यो त्यति नै बढी पुँजीवादको भित्तो चिराचिरा परेर चर्किन्थ्यो । तीमध्ये कुनै चिराबाट सूर्यका राता किरणहरू छिर्ने गर्थे । कुनैबाट घामका पहेलिंदै गरेका छायाहरू चम्किने गर्थे ।
त्यतिखेर बा पनि घर छाडेर बाहिर जाँदा गुन्टा कसेर लैजानुहुन्थ्यो । बाले गुन्टा कसेर हिँड्न लागेको यो अत्यधिक आनन्दको समय हुन्थ्यो मेरा लागि । बालाई जताजता गयो त्यताका मान्छे लौहपुरुषभन्दा रहेछन् । बा बेलाबेलामा आफू लौहपुरुषबाट खुइलिएर लौहभस्म पुरुष भएको कथा हाल्नुहुन्थ्यो । आफ्नो नियतिमाथि आफैं हाँस्नु हुन्थ्यो र भन्नुहुन्थ्यो, “देखो भाइ कुदरतका खेल, पढे फारसी और बेचे तेल ।” उहाँले जे भने पनि बा खुइलिनुभएको पक्कै थिएन ।
बाको मनमा असन्तोषको आगो दनदनी बलेर रातो फिलिंगोमा परिणत भैरहेको थियो । त्यत्रो इज्जतदार पुर्खाको सन्तान भएर पनि बाको मनमा ‘आफ्नै’ भन्ने कुनै महा–कीर्ति आर्जन गर्न नसकेको खीज थियो कि जस्तो लाग्छ मलाई । अन्तत: बाको मनको त्यो खीज बाले नै फेंकिदिनुभो । राजाले राज्य नै सुम्पिँदा त जिम्मा नलिएर साथीलाई अघि सार्ने बाको जीवन अपूर्ण त हुनै सक्दैन ।
राणाहरूको कुशासनविरुद्ध छाती फुकाएर उभिएकाले मात्रै बा रातारात प्रसिद्ध हुनुभएको होइन । राणाहरूको पतनपछि त शहरमा जताततै बाको शौर्यको कथाहरू सुनिन थाल्यो । उहाँको टोपी गर्वको अग्लो सगरमाथा बन्यो । कपालमा गुनकेशरीको फूल सिउरेका शहरका नानीचाहरू बाको आँखामा एक पटक, एक पटक मात्रै, चम्किनका लागि झ्यालबाट चियाउन थाले । कतिको मनमा गीत गुन्जियो होला ।
बाको चित्र इतिहासको पानामा चम्कियो ।
बा अहिले हुनुहुन्न । समय समयमा उहाँ मानिसको तर्कनामा भेटिनुहुन्छ । बेलाबेलामा उहाँका आवाजहरू गाउँ, शहर, राजधानीमा प्रतिध्वनित हुन्छन । बा शहरमा साँझ अलिकति अबेरसम्म हिँड्नुहुन्थ्यो । बाले सधैं टेक्ने गरेको कटबाँसको लौरोको ‘ट्वाक ट्वाक’ आवाज लोकतन्त्रको मूल नशा थियो । यो आवाज शहरबाट निकै पर बाहिरसम्म निकै चट्किलो र निकै टड्कारो सुनिन्थ्यो । त्यो सुनेपछि शहरियाहरू भन्दथे— हो । ऊ हाम्रो देशमा लोकतन्त्र ज्युँदो छ ।
पहिलेपहिले बाले लेख्नुहुन्थ्यो पनि । पछि सबैथोक छोड्नुभयो । लेख्नुहुन्न । मुड हुँदैन रे बूढाको । तर, पढ्नचाहिं उहाँ आफंैमा एउटा पुस्तकालय हो । त्यसबखतको हीराकाजी अलि बदमास थियो भन्छन् । जवानीको हावाले अलि बढी नै छोएको । पहिलेपहिले आधा धार्नी बँदेलको मासु खुब मीठो मानेर खानुहुन्थ्यो । त्योबाहेक दुईवटा कुखुरा र डेढ माना च्युरा त उहाँलाई खाजा नै चाहिने । पछि संघर्षमा लागेपछि उहाँका तृष्णाहरू त्यसै मेटिएर गयो रे । ठाँटिएर हिँड्ने कलामा पोख्त हुनुहुन्थ्यो बा । सात सालमा मन्त्री हुनुभयो । त्यसवेला कसैले उहाँलाई ‘कम्प्लिमेन्ट’ दिएको थियो— यू आर दि वन्ली मिनिस्टर हुम आई अल्वेज सी इन पर्फेक्ट ड्रेस ।
बालाई थाहा थियो, देशका मानिस बलेको आगो ताप्छन् ।
बालाई थाहा थियो, देशका बहुसंख्यक मानिस सत्ताकै पक्षमा लाग्छन् ।
बालाई थाहा थियो, तानाशाहले मूर्दामाथि शासन गर्छ ।
बालाई थाहा थियो, लोकतन्त्रमा जनताले आफ्नो शासन आफैं गर्छ । तर, बलेको आगो ताप्ने नेपालको राजधानीको प्रवृत्तिले डेमोक्रेसीको खिल्ली उडाउँछ ।
‘आजको दिन सजिलैसँग बित्यो’ बाले कहिल्यै पनि भन्न पाउनु भएन । प्रजातन्त्र आएपछि उहाँलाइ लाग्यो, छोरा नपाउन्जेल कसरी पाऊँ, पाएपछि कसरी हुर्काउँ ? बाले नेताको पोज त लिनुभयो । तर, त्यो पोज नै बिस्तारै उहाँका लागि बोझ हुन थाल्यो ।
बालाई थाहा थियो, लोकतन्त्रका विरोधीहरूका लागि अव्यवस्थाको सिर्जना एकदमै उपयोगी हुन्छ । यो अवस्थामा फस्टाउनेहरू कि फासिष्ट हुन्छन् कि एकाधिकारवादी । बालाई आफ्नो लट्ठी र त्यो भुइँमा ठोकिएपछि त्यसबाट आउने आवाजको महत्त्व थाहा थियो । बा त बा हुनुहुन्थ्यो । बा साँच्चैको बा हुनुहुन्थ्यो ।
प्रकाशित : माघ २७, २०७४ ११:५०